DF Somalia oo isku khilaafsan in doorashada la qabto iyadoo aan xal laga gaarin muranka taagan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo isku khilaafsan in doorashada la qabto iyadoo aan xal...
DF Somalia oo isku khilaafsan in doorashada la qabto iyadoo aan xal laga gaarin muranka taagan
(Muqdisho) 10 Jan 2021 – Guddoonka Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku cambaareeyey go’aankii doorashada ee ka soo baxay Xukuumadda Federaalka oo uu ku tilmaamay mid ”nasiib darro ah.”
Md Xaashi ayaa tibaaxay inaysan tillaabo wanaagsan ahayn in doorasho lagu baaqo iyadoo aan la xallinin tabashooyinka taagan, isagoo ka digey inay cawaaqib xumo ka dhalan karto tillaabadan, haddii lagu sii socdo qabashada doorasho aan la isku waafaqsanayn.
Wuxuu XF, gaar ahaan Madaxwaynaha iyo Raysal Wasaaraha ku eedeeyey inay iyagu diideen in laga wada arrinsado oo la xalliyo khilaafka ka taagan doorashada, sida uu yiri.
Xaashi ayaa sidoo kale beeniyey war uu shalay Madaxtooyada ka sheegay MW Galmudug Md Qoor Qoor oo ahaa in loo celiyey jawaab tanaasul ku jiro, isagoo sheegay inaanay jirin cid haba yaraatee arrin noocaas ah ula timid oo ay ka diideen.
Arrintan ayaa ka dhigan in hay’aadkii waawaynaa ee DF Somalia aysan isku waafaqsanayn sida wax u socdaan oo loo arko waqti lumin iyo jahawareerin bulsho, iyadoo ay dadka samaha iyo danaha dalka jecel ay qabaan in ay khasab tahay in xal laga gaaro waxa lagu muransan yahay si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay.
Previous articleSucuudiga oo dayuurado dagaal u diraya dal ay Turkiga is hayaan (Ankara oo arrintaa ka carootey)
Next articleMidowga Yurub oo go’aan ka duwan midka Maraykanka ka qaatay dalka Somalia